မျှော်လင့်ရတဲ့ နေ့ ...
စာမေးပွဲပြီးမှ ဘလော့ဂင်းမယ် စိတ်ကူးထားပေမဲ့ ဒီကနေ့တော့ ၀မ်းသာတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘလော့ပေါ် ရောက်လာမိပြန်ပါတယ်။ မရေရာတဲ့ သတင်းကြောင့် မနေ့ကတည်းက စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျ ဖြစ်နေရတယ်၊ ဒီလိုပဲ သတင်းတွေက ကြားတိုင်းလဲ မှန်ချင်မှ မှန်တာ မဟုတ်လား။ မှန်ပါစေ ဆုတောင်းပေမဲ့ စိတ်ထဲက အားသိပ်မရှိဘူး။ မနက်ခင်း သင်တန်းမသွားခင် မနက်စာစားရင်း ဦးရီးတော်က ပြောတယ် ... မနေ့က ကြားရတဲ့ သတင်းက ခုထိ အတည်မပြုသေးဘူး ဆိုတော့ စိတ်ဓာတ်က ကျချင်ချင်ရယ်။ သင်တန်းက ပြန်ရောက်တော့ နေ့လည် ၁ နာရီ၊ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ကမန်းကတန်း အ၀တ်အစားလဲ ... နေ့လည်စာစားဖို့ ဟင်းနွှေးနေတုန်း ဦးရီးတော်က မီးဖိုခန်းထဲ ၀င်လာပြီး ... သမီးရေ ... လွှတ်လိုက်ပြီ ... လို့ ၀မ်းသာအားရ လာပြောတယ်။ ကျမတို့ တူဝရီးနှစ်ယောက် နွှေးထားတဲ့ ဟင်းထမင်းတွေ ပစ်ပြီး တီဗီမှာ ပြနေတဲ့ သတင်းကို ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တာ အကြာကြီးပဲ၊ ဗိုက်ဆာရကောင်းမှန်းလဲ မသိကြဘူး။ ဒီသတင်းကြားရမယ့်နေ့ကို ကျမတို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပါပကော .... ။
တီဗီက လွှင့်နေတဲ့ သတင်းတွေက ဒီသတင်းကိုပဲ ဦးစားပေး ကြေငြာနေကြတယ်။ ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့က ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီး ကြက်သီးများတောင် ထမိပြီး မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။ တီဗီမှာ ခပ်ဝါးဝါး မြင်နေရတဲ့ ဒေါ်စုမျက်နှာကိုလဲ ကြည့်လို့မ၀ဘူး။ ၀မ်းလဲ သာတယ်၊ ၀မ်းလဲ နည်းတယ်။ ဖော်မပြတတ်တဲ့ ခံစားမှုပေါင်းများစွာနဲ့ .... ရင်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တခါတုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ "အို ... မိခင်" ကဗျာလေးကို ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်တဲ့နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
လူထုက ချစ်သော ... လူထုကို ချစ်သော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါး ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ ... လို့ ... လှိုက်လှဲစွာ ဆုတောင်းရင်း .... ။
(၁၇၊ ၅၊ ၂၀၀၉ က ရေးသည်)
Posted by မေဓာဝီ at 3:42 PM 17 comments
Labels: ကဗျာ, အမှတ်တရ, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၀ ကျော်ကာလ သြဂုတ်လရဲ့ နေ့လည်ခင်း တခုမှာပေါ့။
ကျမ ကျောင်းက ပြန်လာပြီး အိမ်ထဲဝင်တော့ စိတ်ထဲမှာ မသိုးမသန့် ဖြစ်သလို ခံစားရတယ်။ အ၀တ်လဲဖို့ ကိုယ့်အခန်းကို အသွား တီဗီကြည့်တဲ့ ဟောခန်းကို ဖြတ်တော့ တီဗီရှေ့က သစ်သားကွပ်ပျစ်ကလေးပေါ်မှာ မတင်ဌေး ဆိုတဲ့ အိမ်အကူကောင်မလေး နေမကောင်းလို့ လှဲနေတာ တွေ့တယ်။ သူ့ဘေးနားမှာတော့ ဗေဒင်ဆရာမ ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင် မဟာဘုတ်တောင် မထူတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် ရှိနေတယ်။ နာမည်က မဝေတဲ့။ သူက ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အိမ်ကိုလာလာပြီး လူကြီးတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြော ထမင်းစား ကော်ဖီသောက် လမ်းစရိတ်တောင်းပြီး ပြန်နေကျ။
မဝေက မတင်ဌေးကို ပြုစုနေတာလား ဘာလား မသိပါဘူး။ ခေါင်းကို ယပ်ခတ်လိုက် ခြေထောက်ကို နှိပ်လိုက် ရှူဆေးတွေ သွေးဆေးတွေ ရှူခိုင်းလိုက်နဲ့ ပြာယာခတ်နေတာပဲ။ မတင်ဌေးက တော်ရုံ နေမကောင်းဖြစ်ခဲတော့ ကျမလဲ နည်းနည်းအံ့သြတာနဲ့ အ၀တ်အစားလဲပြီး သူတို့အနား သွားထိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ မတင်ဌေးက မျက်စိမှိတ်ထားပြီး တအင်းအင်း ညည်းနေတယ်။ သွားကြီးစေ့ အံကြိတ်ပြီး ခေါင်းတွေလဲ ခါခါယမ်းယမ်းနဲ့။ ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း မငြိမ်ဘူး ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေတယ်။ မဝေကလဲ ခြေမချိုးလိုက် ပေါင်တွင်းကြောကို တက်နင်းလိုက် လုပ်နေတယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ မတင်ဌေးခြေသလုံးမှာ အညိုအမည်းတွေ ထင်လာသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ မဝေပဲ တအားနင်းလို့ များလားလို့ မဝေကို ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေတဲ့ မတင်ဌေးက တချက်တချက် ငြိမ်သွားပေမဲ့ တချက်တချက်တော့ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်တယ်။ အသံကလဲ ခပ်အစ်အစ်နဲ့ လည်ပင်းမှာ တခုခုဆို့နေသလိုပဲ။
အမေရောက်လာတော့ မတင်ဌေးကို ဆေးခန်းပို့ပေးဖို့ စီစဉ်တယ်။ ဆေးခန်းနဲ့ အိမ်နဲ့က ၂ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရင် ရောက်ပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ အားအင်ကုန်ခမ်း ချိနဲ့နေသလိုမို့ ဆိုက်ကားခေါ်ထားတယ်။ ခြံထဲမ၀င်ဘဲ ခြံပြင်မှာပဲ စောင့်နေတဲ့ ဆိုက်ကားဆီ မတင်ဌေးကို အိမ်ထဲကနေ လူနှစ်ယောက်လောက်တွဲပြီး ပို့ရတယ်။ ဆိုက်ကားဆီလဲ ရောက်ရော သူက မစီးဘူးတဲ့။ ကျမ လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီး လျှောက်သွားပါလေရော။ ဆေးခန်းမှာထိုင်စောင့်တော့လဲ အကောင်းပဲ၊ အလှည့်ကျတော့ ဆရာဝန်မလေးက သွေးပေါင်ချိန်တာတို့ ဘာတို့လုပ် ဟိုစမ်း ဒီစမ်း စမ်းပြီး … ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ကောင်းသားပဲ လို့ပြောပြီး ခေါင်းမူးနေတယ်ဆိုတာနဲ့ စိတ်ကျေနပ်အောင် အားဆေးတလုံး ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဆရာဝန်မလေးက အမေ့ကိုတော့ ခပ်တိုးတိုးကပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဒီကောင်မလေး အလုပ်မလုပ်ချင်လို့ မူယာမာယာ များနေတာ နေမှာပါ … ဆိုပဲ။
နောက်တော့ အိမ်ပြန်ရောက်လာရော … အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ သူက ချိနဲ့သလို ပြန်ပြီး ခွေကျသွားပြန်တယ်။ ဟဲ့ ဟဲ့ ဖြစ်ပြန်ပြီဆိုပြီး ဆေးခန်းထပ်ပို့ပြန်တယ်။ ဟိုရောက်ရင် အကောင်း … အိမ်ထဲရောက်ရင် လူမမာ … ဆိုတော့ စိတ်ထဲ သိပ်မသင်္ကာကြတော့ဘူး။ ခုနက မဝေကလဲ ပြောသွားသေးတယ် … ဒါ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်ဘူး … အမှောင့်ပယောဂ … တဲ့။ မဝေကို သိပ်မယုံကြပေမဲ့ ဟုတ်လေမလားလို့ ဇဝေါဇ၀ါ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူတချက်တချက် မညည်းမညူဘဲ စိတ်ကောင်းဝင်နေတုန်းမှာ နင် ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ … တခုခုမှားခဲ့သလား … လို့ မေးတော့ … သူက ပြောပြတယ်။
နေ့လည်က ခြံနောက်ဘက်မှာ ဘူးစင်ထိုးဖို့ ခြံရှင်းသတဲ့။ အရင်တုန်းကတော့ ခြံကို ၀ါးရုံပင်တွေနဲ့ စည်းရိုးခတ်ထားတာပဲ။ ၈၈ အရေးအခင်း မတိုင်ခင်လေးမှာ အဘိုးရဲ့ အမိန့်အရ ၀ါးခြံစည်းရိုးကို ဖယ်ပြီး တခြံလုံးကို အုတ်တံတိုင်း ကာလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ဝါးပင်တွေက အုတ်တံတိုင်း အတွင်းဘက်မှာ ကျန်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီဝါးပင်တွေက အုံလိုက်ကလေး လေးငါး ဆယ်ပင် တစုတဝေး ပေါက်နေတော့ အောက်ခြေက တောင်ပို့ကလေးလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ခြံရှင်းနေတုန်း ၀ါးရုံ တောင်ပို့နားက မြွေတကောင် ထွက်လာလို့ သူက လက်ထဲက ပေါက်တူးနဲ့ လှမ်းရိုက်လိုက်သတဲ့။ ဒါပေမဲ့ မြွေက ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘဲ လိပ်ပြာလေးတကောင်ပဲ တွေ့ရတော့တယ် တဲ့။ သူကလဲ စိတ်ကြီးတယ်၊ မြွေကို မတွေ့တော့ တွေ့တဲ့လိပ်ပြာကိုပဲ မဲပြီး စိတ်တိုတိုနဲ့ လှမ်းအရိုက်မှာ ရုတ်တရက် မိုက်ခနဲဖြစ်ပြီး ချော်လဲကျသွားတယ်တဲ့။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ခုလို ဖြစ်သွားတော့တာပဲ။
သူ့စကားကြားတော့ အားလုံး သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဒါဆိုရင် တခုခု ပူးနေတာ သေချာပြီပေါ့။ သူဖြစ်ပုံကလဲ တမျိုးပဲ။ တချက်တချက်ကောင်းနေတယ်၊ တချက်တချက်တော့ နာလွန်းလို့ အော်ဟစ် ညည်းညူနေရရှာတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိပေါ့ … ဒီတိုင်းထားလို့တော့ မဖြစ်ဘူး၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ညနေ စောင်းပြီး အပုပ်ချိန်ရောက်လာပြီ၊ အိမ်သားတွေလဲ လန့်နေကြပြီ ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး အိမ်နားက ဘုန်းကြီးကျောင်းက ရင်းနှီးတဲ့ ဘုန်းကြီးတပါးကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး သွားပင့်ကြတယ်။ ဘုန်းကြီးက ပထမတော့ အင်တင်တင်ရယ်၊ ဒါမျိုးက အာပတ်သင့်သလားတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဒကာ ဒကာမတွေရဲ့ အရေးဆိုတော့ ဘုန်းကြီးလဲ မနေသာဘဲ ကြွလာပေးပါတယ်။
ဘုန်းကြီးလုပ်ပေးပေမဲ့ သိပ်တော့မထူးခြားဘူး။ ပြန်သွားတော့လဲ အရင်အတိုင်းပဲ။ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်လိုက်၊ တအင်းအင်း ညည်းလိုက်နဲ့။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အညိုအမည်းတွေ ပိုများများလာတယ်။ လည်ပင်းမှာပါ အညိုအမည်းတွေ ဖြစ်ပြီး အသံက သိပ်မထွက်တော့ဘူး။ နာတယ် နာတယ်လို့ အော်သံရယ် … တင်းပုတ်နဲ့ ၀ိုင်းရိုက်နေကြတယ် …. ဆိုပြီး မပီမသ ပြောသံရယ်တော့ ကြားလိုက်ရသေးတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မဖြစ်ချေဘူး၊ နောက်ထပ် ဘုန်းကြီးတပါးကို ပင့်အုံးမှ ဆိုပြီး ခြောက်ထပ်ကြီးက ရှမ်းဘုန်းဘုန်း (ယခု ပျံလွန်တော်မူပြီး) ကို ပင့်ပြန်ပါတယ်။ ရှမ်းဘုန်းဘုန်းက နားသိပ်မကြားဘူး။ အင်းတွေဘာတွေ လုပ်တယ်။ မမြင်ရတဲ့လောကနဲ့ စကားတွေဘာတွေ ပြောပြီး အဆက်အသွယ်လဲ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ရှမ်းဘုန်းဘုန်းရောက်လာပြီး ဓားပုံစံ ကျွဲချိုကလေးနဲ့ ခပ်ဆတ်ဆတ် ခုတ်ရင်း ပါးစပ်ကလဲ တခုခုရွတ်ပေးနေတယ်။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း တဖြည်းဖြည်း ခြေထောက်ကနေ ထွက်သွားသလိုပဲ … နည်းနည်းငြိမ်သလို ရှိသွားတော့ ဘုန်းဘုန်းလဲ ပရိတ်ကြိုးလေး လည်ပင်းမှာချည်ပေးပြီး ပြန်ကြွသွားပါတယ်။
ကျမလဲ တခါမှ ဒါမျိုးမကြုံဖူးတော့ အရမ်းအံ့သြပြီး သူ့အနားက မခွါဘဲ ဖြစ်ပျက်သမျှတွေ တချိန်လုံး စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ (မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီအချိန်က စာမေးပွဲနီးနေပြီ၊ ဒါပေမဲ့ စာမဖတ်ဘဲနဲ့ စပ်စုနေခဲ့တာ။) ရှမ်းဘုန်းဘုန်း ပရိတ်ကြိုးချည်ပေးလို့ နည်းနည်းငြိမ်သွားတော့ အိမ်သားတွေလဲ အသီးသီး ကိုယ့်အခန်းကိုယ် ၀င်သွားကြပြီ၊ ကျမကတော့ သူလှဲနေတဲ့ ကွပ်ပျစ်ကလေးမှာ ၀င်ထိုင်ပြီး သူ့ခေါင်းရင်းကနေ ကမ္မ၀ါ၊ ပရိတ်ကြီး ၁၁-သုတ်၊ ပဋ္ဌာန်း ရှိသမျှ ဘုရားစာတွေ အခေါက်ခေါက် ထိုင်ရွတ်ပေးနေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ကမ္မ၀ါကို များများရွတ်ပါတယ်။ ကမ္မ၀ါရွတ်ရင် မကောင်းဆိုးဝါးတွေ မလာဘူး၊ ပြေးတယ်လို့ သိထားတာကိုး။
ကျမ ကမ္မ၀ါရွတ်ပြီဟေ့ဆိုရင် သူက မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီး လည်ချောင်းအစ်သံကြီးနဲ့ မရွတ်နဲ့ … နားညည်းတယ် … လို့ပြောတယ်။ ဘယ်ရမလဲ ကျမလဲ ဆက်ရွတ်တာပါပဲ၊ ပိုတောင် အသံပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ရွတ်လိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ သူက တဆင့်တက်လာပြီး ကျမကို ခိုင်းတယ်။ လည်ပင်းက ပရိတ်ကြိုးဖြုတ်ပေးပါ … တဲ့။ ဒီလောက်တော့ ကျမက လည်ပါတယ်၊ ဘယ်ဖြုတ်ပေးလိမ့်မလဲ။ ဒါပေမဲ့ သူကလဲ ပိုတော့အလည်သား … ကျမကို လာညှိတယ်၊ ပရိတ်ကြိုးဖြုတ်ပေးရင် ထွက်မယ်ဆိုပဲ။ တကယ်လား ဆိုတော့ … အင်း …. တဲ့။ ကျမလဲ ဖြုတ်ပေးရ ကောင်းနိုးနိုး စဉ်းစားနေမိသေးတယ်။ ဖြုတ်တော့ မဖြုတ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။
ခဏနေတော့ ဒင်းက ကြမ်းလာပြန်တယ်။ အနားမှာထောင်ထားတဲ့ သင်ဖြူးဖျာလိပ်ကို ပြေးပြီးကန်တယ်။ အပွေးကုန်နေတဲ့ သနပ်ခါးတုံး၀၀ကြီးကို ပစ်ပေါက်တယ်။ အဲဒီဖျာလိပ်မှာ ကပ်နေကြတာ …. လို့လဲ လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီး ပြောတယ်။ ကျမတို့မှာ ဖျာလိပ်ကြီး အိမ်နောက်ဖေးပို့ထားရတယ်။ ကြောက်လို့။ အကောင်တွေ အများကြီး ပြောင်ပြနေကြတယ်လို့လဲ ဆိုတယ်။ သွားသွား ဆိုပြီး အော်ပြီး ပြေးကန်လိုက် ဟိုဟာနဲ့ပေါက် ဒီဟာနဲ့ပေါက် လုပ်လိုက်မို့ ကျမတို့မှာ တီဗီထိမှာစိုးလို့ လိုက်ဆွဲနေရသေးတယ်။ အဲလိုတွေ ဖြစ်ပြန်တော့ မထွက်သေးဘူးဆိုတာ သေချာသလောက်ပဲပေါ့။ ဒီလိုသာဆို ဘာမှန်းမသိတဲ့ အကောင်တွေနဲ့ တညလုံး တအိမ်ထဲ အတူနေရမလို ဖြစ်နေတာနဲ့ နောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတပါး ထပ်ပင့်ကြရပြန်တယ်။ အဲဒီဘုန်းကြီးကတော့ ကျမကို ပုံပြောပြလေ့ရှိတဲ့ ခြောက်ထပ်ကြီး သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းက ဆရာတော်ပါ။ (သံဃာအရေးအခင်းမှာ အဖမ်းခံရပြီး နောက်ပိုင်း သိပ်မကြာခင်မှာ ပျံလွန်တော်မူသွားပါပြီ။) ဆရာတော်ကို သွားပင့်တော့ ကိုယ်တိုင် လိုက်မလာပါဘူး။ ကျမအမကြီးကို တပည့်အဖြစ် လက်ဝါးချင်းရိုက် သတ်မှတ်ပြီး ရုပ်ပုံထွင်းထားတဲ့ ခပ်ညိုညို အတုံးလေးတခု ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ခေါက်ပြီး ဘယ်လိုဘယ်လိုပြော ဆိုပြီး သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ညကလဲ တဖြည်းဖြည်း နက်လာပြီ။ အမကြီးလဲ ဆရာတော်သင်ပေးသလို ကြိုးစားလုပ်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမထူးခြားဘူး။ မတတ်သာတဲ့အဆုံး ဆရာတော်ကို ပြန်သွားလျှောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လိုက်ခဲ့ဖို့ တောင်းပန်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာတော်လည်း အိမ်သားတွေကို သနားတာနဲ့ လိုက်လာခဲ့တယ်။
ဆရာတော် အိမ်ရောက်လာတော့ မတင်ဌေးကို သူ့ရှေ့မှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဆရာတော်နဲ့ မတင်ဌေး အမေးအဖြေ လုပ်ကြပါတယ်။ မတင်ဌေးရဲ့ အသံက ပျက်သလောက် ဖြစ်နေပြီ၊ သေချာမဖြေနိုင်တော့ဘူး။ များသောအားဖြင့် လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့သာ ဖြေတယ်။ စကားပြောဖြေတဲ့အခါ ကျမက သူ့ပါးစပ်နားကို ကပ်နားထောင်ပြီး ဆရာတော်ကို ပြန်ပြောပြရတယ်။ ကြားထဲက translator ဆိုပါတော့။ ဆရာတော်နဲ့ မတင်ဌေး အမေးအဖြေလုပ်တဲ့အတိုင်း ပြန်ရေးပြပါမယ်။
(မျက်ထောင့်ကြီး နီလာပြီး ပြောတယ်။ နှာခေါင်းကလဲ တရှူးရှူးနဲ့ နှာတွေမှုတ်ပြီး အသက်ရှူသံပြင်းလာတယ်။)
သူ့ရုပ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ကျမလဲ ကျောထဲက စိမ့်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ ကြောက်လိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်အနားမှာရှိလို့ မကြောက်သလိုနဲ့ ခပ်တည်တည်ပေါ့။
နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်ပုံကို ဆရာတော်က ရှင်းပြပါတယ်။ ဟိုးအရင်ခေတ်တုန်းက ဒီနားတ၀ိုက် ရွာကလေးမှာ နေသွားသူ တယောက်တလေက အဲဒီဝါးရုံပင်အောက်က တောင်ပို့ကလေးမှာ ရွှေတိုရွှေစလေးတွေ မြှုပ်ခဲ့သတဲ့။ သူမြှုပ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းအစွဲနဲ့ ဒီနေရာမှာ အစောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း အကောင်ကြီးပြီး အပေါင်းအဖော်တွေ တပည့်လက်သားတွေ များလာပုံပါပဲ။ မတင်ဌေး ဘူးစင်ထိုးဖို့ တောင်ပို့နားမှာ မြေပေါက်တော့ သူတို့ပစ္စည်းတွေ တူးယူမယ်မှတ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကြီးက ခြောက်လှန့်ဖို့ မြွေအဖြစ်နဲ့ ထွက်လာတာ။ မတင်ဌေးက မကြောက်ဘဲ ရိုက်လိုက်တော့ ခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပူးပြီး အသေသတ်ဖို့ လုပ်ကြတာ။
ခေါင်းဆောင်ကြီးထိတော့ တပည့်လက်သားတွေက စိတ်ဆိုးပြီး မတင်ဌေး လည်ပင်းကို ညှစ်၊ တကိုယ်လုံးကို တင်းပုတ်တွေနဲ့ ရိုက်၊ ဒေါသဖြစ်အောင် အမျိုးမျိုး ပြောင်ကြ နောက်ကြနဲ့ ၀ိုင်းသမကြတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ခမျာမှာ အညိုအမည်းတွေ ပေါ်ပြီး ထွန့်ထွန့်လူး ညည်းညူနေရရှာတာပါ။ အဲ … ခြံထဲကလဲ ထွက်တော့ သူတို့ပိုင်နက် ကျော်သွားတာမို့ ဆက်မလိုက်ကြတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့် ဆေးခန်းရောက်ရင် အကောင်းပတိ ဖြစ်နေတာတဲ့။ သူတို့ကလဲ ပူးတုံခွါတုံပါ။ ပူးနေချိန်ဆို မျက်ထောင့်နီနီ အံကြီးကြိတ်ထားတယ်။ ခွါနေချိန်ဆို ဖျာလိပ်တို့ သနပ်ခါးတုံးတို့လို သစ်ဝါးနဲ့ လုပ်တဲ့အရာတွေကို ကပ်ပြီး မတင်ဌေးမြင်သာအောင် အမျိုးမျိုး ခြောက်လှန့်ကြ နောက်ပြောင်ကြတယ်။ ပုံစံတွေက ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေ အကြေးခွံအကွက် အကွက်တွေလဲပါသတဲ့။ (အဲဒါက နောက်ပိုင်း မတင်ဌေးပြန်ပြောပြတာပါ)
အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြပြီးနောက် ဆရာတော်က သူ့သီလနဲ့ တိုင်တည် သစ္စာပြုပြီး နတ်တွေ အကုန်လုံးကို ပင့်ဖိတ်တယ်။ ဒီအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေကို မနှောက်ယှက်ဖို့ သူတို့ထက် စီနီယာနတ်တွေကို အမိန့်ပေးခိုင်းတယ်။ မင်းတို့ကိုလဲ မနှောက်ယှက်ဘူး၊ အိမ်သားတွေကိုလဲ မနှောက်ယှက်နဲ့။ ဒါကိုမှ နှောက်ယှက်မယ်ဆိုရင် မင်းတို့ဒီမှာ မနေရအောင် လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့လဲ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ နွားနို့ရယ် ပေါက်ပေါက်ရယ် အမွှေးတိုင်ရယ် အဲဒီတောင်ပို့နားမှာ သွားချပြီး မတင်ဌေးကိုယ်တိုင် တောင်းပန်ခိုင်းတယ်။ နဂါးစောင့်တဲ့ သိုက်မို့ နွားနို့ပေါက်ပေါက်နဲ့ တောင်းပန်ရတာလို့ ပြောတာပဲ။
ညဘက်မို့ ခြံထောင့်က တောင်ပို့နားမှာ အတော်လေး မှောင်နေပါတယ်။ အဲဒီနားမှာ သရက်ပင် သုံးပင် တြိဂံလို ပေါက်နေတဲ့နေရာကို ကျမတို့ငယ်ငယ်က မြေပုံတွေဘာတွေ ဆွဲပြီး ရတနာသိုက် ရှာတမ်း ကစားခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ခုတော့ တောင်ပို့က ရတနာသိုက် ဖြစ်နေပါရောလား။ မတင်ဌေး သွားတောင်းပန်တော့ ကျမတို့လဲ ခပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ လိုက်သွားကြည့်ကြတယ်၊ ဘာမှတော့ မမြင်ခဲ့ရဘူး။ ၀ါးရုံပင်က လေတိုက်လို့ တရှဲရှဲမြည်တာနဲ့ ကြောက်ပြီး ပြန်ပြေးလာခဲ့ကြတာပဲ။
ခြံနောက်ဘက်မှာက သစ်ပင်ကြီးတွေအပြင် ရေတွင်းအိုကြီးရယ်၊ အိမ်သာ သုံးလုံးရယ်၊ ရေစင် အမြင့်ကြီး တခုရယ် ရှိတယ်။ အရင်ကတော့ ပြေးလွှားဆော့ကစားကြ စစ်တိုက်တမ်း တူတူပုန်းတမ်းကစားကြတဲ့ နေရာဆိုပါတော့။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျမတို့တွေ ခြံနောက်ဘက်ကို နေ့ရော ညပါ မသွားရဲကြတော့ဘူး။ အိမ်သာကိုလဲ အိမ်ထဲက အိမ်သာပဲ သွားဖြစ်ကြတော့တယ်။ မယုံဘူးလို့ အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့ကျမလဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်တွေ့ကြုံရတော့ မယုံချင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ တခြားသူတွေ တစ္ဆေသရဲ ပူးပြီး ပြန်ထွက်သွားရင် ဘယ်လိုနေသလဲ မသိပေမဲ့ မတင်ဌေးကတော့ ရက်အတော်ကြာမှ အညိုအမည်းတွေ ပျောက်ပြီး အသံလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထွက်လာပါတယ်။
သူတို့ကို တစ္ဆေလား သရဲလား ဥစ္စာစောင့်လား နတ်နဂါးလား ဆိုပြီး တခုခုတော့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတဲ့ ဒီလိုလောကသားတွေ ရှိနေတယ်၊ သူတို့နဲ့ ကိုယ်က ကြားခံနယ်ချင်း မတူလို့ နိစ္စဓူဝ မမြင်မတွေ့ရပေမဲ့ ခုလို အခန့်မသင့်တဲ့အခါမျိုးမှာ တွေ့မြင်နိုင်သလို ၀င်ရောက်ပူးကပ်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကိုကိုယ်က မထိခိုက် မစော်ကားဖို့နဲ့ ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါ အမျှဝေဖို့ မေတ္တာပို့ပေးဖို့ လိုတယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျမ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
၃၁၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၀
(အသိပေးခြင်း။ … ။ ၆ လတခါ မဆုံချင်ဘဲ ဆုံနေရတဲ့ စာမေးပွဲကြောင့် ဘလော့ဂင်းခြင်းကို ခေတ္တ နားရပါဦးမယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှ ပြန်ဆုံကြပါစို့။)
Posted by မေဓာဝီ at 8:00 PM 25 comments
ဒီအကြောင်းကို ရေးမယ်တွေးထားတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မယုံသူတွေအတွက် လက်မခံနိုင်စရာများ ဖြစ်နေမလား စဉ်းစားမိလို့ မရေးသေးဘဲ တေးထားခဲ့တယ်။ ခုတော့ သရဲဇာတ်လမ်းတွေ ခေတ်စားနေတဲ့ အခါသမယမို့ ရေးဖို့ အားတက်လာတယ်။ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်တိုင်ကြုံမှ ယုံမယ်လို့ အပြောကြီးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမ ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတာလေးပါ။ သရဲများည အမှတ်တရ ခါတော်မီ ရာသီစာလေး ဆိုပါတော့ … ။
ဇာတ်လမ်းမစခင် ကျမတို့ ခြံအကြောင်း နည်းနည်း အစပျိုးပါရစေ။ ကျမတို့ အိမ်က အရင်တုန်းက လူမျိုးခြားတဦးပိုင်တဲ့ အထည်စက်ရုံလို့ လူကြီးတွေ ပြောပြဖူးတယ်။ လုပ်ငန်းတွေ ပြည်သူပိုင်သိမ်းတော့ အဲဒီစက်ရုံကြီးလဲ သိမ်းခံလိုက်ရသတဲ့။ နောက်ပိုင်း သိမ်းထားတဲ့ အိမ်တွေ ခြံတွေ အစိုးရက ပြန်ရောင်းတော့ အဘိုးက ၀ယ်ထားလိုက်ပြီး လူနေအိမ်အဖြစ် နေကြတာ ခုထိအောင်ပါပဲ။ စက်ရုံဝင်းဆိုတော့ ခြံက ကျယ်တယ်၊ သီးပင် စားပင်လဲ အစုံပဲ။ သရက်၊ ပိန္နဲ၊ သြဇာ၊ မာလကာ၊ တမာ၊ မန်ကျည်း ... အပင်ကြီးတွေ များတယ်။ ဒါပေမဲ့ ...
အဲဒီခြံနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ သင်္ချိုင်းကြီး တခုရှိတယ်။ တရုတ်လူမျိုးစု တခုရဲ့ သင်္ချိုင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ သင်္ချိုင်းလို့သာဆိုတယ် ကျမ သိတတ်တဲ့ အရွယ်ကစလို့ သင်္ချိုင်း မဖျက်ခင် အချိန်ထိ အသုဘလာချတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ တခါတလေ တစ္ဆေကြီးပွဲလို နေ့မျိုးမှာ သင်္ချိုင်းလာကန်တော့ကြတာ မြင်ဖူးပေမဲ့ အင်မတန် တွေ့ရခဲပါတယ်။ တရုတ်တွေက လူသေရင် ပစ္စည်းပစ္စယတွေ အုတ်ဂူထဲ ထည့်မြှုပ်တတ်တော့ တချို့က အုတ်ဂူတွေဖောက်ပြီး ပစ္စည်းရှာကြသတဲ့။ တခါတော့ အုတ်ဂူကို တူရွင်းချွန်နဲ့ ထိုးဖောက်နေတုန်း ရုတ်တရက် အမွှေးနံ့ ထောင်းထောင်းထလို့ ဖောက်သူတွေ လန့်ဖျပ်ပြီး ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ နာနာဘာဝလား ဥစ္စာစောင့်လား ဘာလားပေါ့။ နောက်မှ မရဲတရဲ ပြန်သွားကြည့်တော့ အုတ်ဂူထဲ ထည့်ထားတဲ့ ရေမွှေးပုလင်းကြီးတလုံးကို တူရွင်းနဲ့ ထိုးမိလို့ ကွဲပြီး အမွှေးနံ့တွေ ထွက်လာတာတဲ့။ အဲဒီလို သင်္ချိုင်းဖောက်သူတွေက သေသူတွေရဲ့ လက်ဝတ် လက်စားတွေအပြင် ရွှေသွားတွေဘာတွေပါ ချွတ်ယူကြတယ်လို့ တဆင့်စကား ကြားခဲ့ဖူးတယ်။
မွေးကတည်းက သင်္ချိုင်းရှေ့မှာမွေး၊ သင်္ချိုင်းရှေ့မှာကြီးခဲ့တော့ သင်္ချိုင်းဆိုတာကို ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိပါဘူး။ အိမ်ပေါ်ထပ်ဝရံတာကနေ သင်္ချိုင်းကို ကြည့်ရတဲ့ ရှုခင်းကို သိပ်သဘောကျတယ်။ သင်္ချိုင်းရဲ့ အလယ်မှာ သစ်ပင်ကြီး တပင်ရှိတယ်။ ကုက္ကိုပင်လို့ ထင်တာပဲ။ အဲဒီ အပင်ကြီးအောက်မှာတော့ အုတ်ဇရပ်ကလေးရှိတယ်။ ဆောင်းဦးဝင်စဆိုရင် ကလေးတွေက အုတ်ဂူတွေပေါ်မှာ စွန်လွှတ်ကြတယ်။ နွေဆို ရိုးတံကျိုးကျဲ သစ်ပင်ကြီးနဲ့ … စီစီရီရီ အုတ်ဂူကလေးတွေနဲ့ … ညိုညစ်ညစ် ဇရပ်ကလေးနဲ့ .. အပေါ်စီးက မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက အထီးကျန်စရာ။ မိုးရာသီဆိုရင်တော့ သင်္ချိုင်းမြေတခုလုံး ရှည်လျားလျား မြက်ရိုင်းတွေ … အုပ်အုပ်ပုံ့ပုံ့ ချုံပုတ်ငယ်လေးတွေ ဖုံးလွှမ်းလို့။ ရာသီတိုင်းရဲ့ သင်္ချိုင်းရှုခင်းဟာ ကျမအတွက်တော့ မရိုးနိုင်စရာပါပဲ။
နေကလဲ သင်္ချိုင်းဘက်ကထွက်တယ်။ လကလဲ သင်္ချိုင်းဘက်မှာ သာတယ်။ ရောင်စုံတိမ်တိုက်တွေရယ် … ပြာလွင်လွင် ကောင်းကင်ပြင်ကြီးရယ် … ပျံဝဲနေတဲ့ ကျေးငှက်တွေရယ် … အလေ့ကျပေါက်တဲ့ အရိုင်းပန်းပင်တွေရယ် … ရှိရှိသမျှ သဘာဝအလှတွေက အဲဒီသင်္ချိုင်းဘက်မှာ ရှိတယ်။ ကျမ ပျင်းပျင်းရှိရင် … ဒါမှမဟုတ် စိတ်တွေ မျောလွင့်ချင်ရင် အိမ်ရှေ့က သင်္ချိုင်းရှုခင်းကို တကူးတက ကြည့်နေကျပေါ့။
အိမ်ထဲက သရဲဇာတ်လမ်း တချို့
သင်္ချိုင်းရှေ့က အိမ်ဆိုတော့ သရဲတွေဘာတွေများ ရှိလေမလားလို့ သိတတ်စ (သရဲကို ကြောက်ရကောင်းမှန်း သိစ) အရွယ်မှာ တွေးခဲ့မိတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျမကို ထိမ်းတဲ့ အမကြီးက ကျမဆိုးရင် ခြောက်လေ့ရှိတာ …
“ကုလားသုံးယောက် မျက်စိခြောက်လုံး လာလိမ့်မယ် …” တဲ့။
သူအဲလိုပြောရင် ကျမမှာ ကြောက်လိုက်တာ ပျာလို့။ ဘယ်မှာနေရမှန်းမသိဘူး။ မျက်စိကို အတင်းမှိတ်ပြီး အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်ရတယ်။ နည်းနည်းနားလည်တဲ့ အရွယ်ရောက်မှ သိတော့တယ်။ ကုလားသုံးယောက်ပါဆိုမှ မျက်စိခြောက်လုံးပေါ့ … ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ခြောက်တယ်ဆို ကြောက်ထည့်လိုက်တာပဲ။
ကျောင်းတက်တော့ ပသျှူးခေါင်းပြတ်၊ ခြေကလိမ်မ၊ ကျောပေါက်ကြီး စသဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် မရိုးနိုင်တဲ့ သရဲပုံပြင်တွေ ကြားခဲ့ ကြောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲလိုနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထဲလဲ သရဲဇာတ်လမ်းတွေ လုပ်ကြံ ဖန်တီးလို ဖန်တီးပေါ့။ ကျမတို့ မမွေးခင် (မမှတ်မိခင်) အချိန်လောက်က အိမ်မှာ လက်တိုလက်တောင်း ကူပေးတဲ့ တိုင်းရင်းသူ ကလေးမလေး တယောက်ရှိတယ်တဲ့။ သူ့နာမည်က မို့ယူ ဆိုပဲ။ သူက နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားတော့ တခါတလေ သူနေခဲ့ဖူးတဲ့ အခန်းမှာ အရိပ်လိုဘာလို ရိုးတိုးရိပ်တိတ် မြင်ရတယ်လို့ အတူနေ အကိုဝမ်းကွဲတွေ ပြောကြတယ်။ သူနေခဲ့တဲ့ အခန်းကို နောက်ဆုံးခန်းလို့ ကျမတို့က ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်ရဲ့ အစွန်ဆုံးအခန်း မီးရောင်မှိန်ပျပျနဲ့ ချောင်အကျဆုံး အခန်းလေးပေါ့။ အဲဒီအခန်းပြတင်းပေါက် သံတိုင်မှာ မို့ယူကို တွဲလောင်းလေး မြင်ရတယ် ဆိုတဲ့ ပါးစပ်ဇာတ်လမ်းမျိုး မောင်နှမတွေကြားမှာ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိတယ်။ တခါမှ မမြင်ဖူးလို့ ကျမကတော့ မယုံပါဘူး။
အဲဒီနောက်ဆုံးခန်းလေးမှာ ဧည့်သည်တွေလာရင်လဲ တည်းခိုနားနေလေ့ရှိတယ်။ တခါတော့ မုံရွာက အမျိုးတယောက် ဆေးလာကုတော့ ထုံးစံအတိုင်း အဲဒီအခန်းမှာ ထားတယ်။ နာမည်က ဒေါ်မြစိန်တဲ့ … အသက်ကြီးပါပြီ။ ဆေးလာကုပေမဲ့ ရောဂါကကျွမ်းနေတော့ သိပ်မကြာခင်မှာ ဆုံးသွားပါတယ်။ ဆေးရုံမှာ ဆုံးပေမဲ့ အသုဘကို အိမ်မှာပဲ လုပ်ရတာပေါ့။ သူဆုံးသွားတော့ နောက်ထပ် သရဲဇာတ်လမ်းတပုဒ် နောက်ဆုံးခန်းလေးမှာ တိုးလာတယ်။
အဲဒီအခန်းက ပြတင်းပေါက်မှန်တချပ်ကလဲ အက်နေတယ်၊ ခန်းဆီးကလဲ လူမနေတော့ ဖုန်တုန်တုန် မှုန်တုန်တုန်၊ လေတိုက်ရင် မှန်အက်နေတဲ့ နေရာက လေတိုးတော့ ခန်းဆီးက တလှုပ်လှုပ်နဲ့။ ညဘက်ဆိုရင် အပြင်က အပင်ကြီးတွေ လေတိုက်တိုင်း တယိမ်းယိမ်း လှုပ်ရမ်းနေတာကို ပြတင်းပေါက်ကတဆင့် မြင်ရတာ ၀ိညာဉ်လောကသားတွေ ကခုန်နေသလိုပဲ။ ကျမတို့တွေ အဲဒီနောက်ဆုံးခန်းကို မသွားရဲကြဘူး၊ မှန်ပြတင်းကို မကြည့်ရဲကြဘူး။ တယောက်ယောက်များ မတော်တဆ သွားမိရင် ((((မို့ယူလာပြီ)))) ((((ဒေါ်မြစိန်ကြီးးးးဟိုမှာ)))) … ဆိုပြီး သူ့ထက်ငါ ဦးအောင် ခြောက်ကြတော့တာပဲ။
ကျမတို့က အိမ်ထဲမှာတွင် မကဘူး၊ အိမ်နားက သရဲတွေပါ အိမ်ထဲကို ခေါ်လာပြီး ဇာတ်လမ်း ဆင်တတ်ကြသေးတယ်။ ငယ်ငယ်က အစိမ်းသေ … ဆိုရင် ဘာကိုပြောမှန်းသာ မသိတာ အစိမ်းသေ သေတာလို့ ကြားရင် သရဲဖြစ်ပြီလို့ သတ်မှတ်လိုက်တော့တာပဲ။ အိမ်နားမှာ ဒေါ်စိမ်းရီ ဆိုတဲ့ အဒေါ်ကြီး အစိမ်းသေတော့ အဲဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခြောက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ နာမည်ကလဲ “စိမ်း” ပါနေပြီး သေတာလဲ အစိမ်းသေဆိုတော့ ခြောက်လို့ကောင်း ကြောက်လို့ကောင်းပေါ့။
နောက်ပြီး ကျမတို့ အိမ်နီးနားချင်း အဒေါ်ကြီးတယောက် ရေတွင်းထဲခုန်ချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံသွားခဲ့ဖူးတယ်။ သူရောဂါ ဝေဒနာခံစားနေရတာ မခံနိုင်လို့ အဆုံးစီရင်လိုက်တာတဲ့။ အဲဒီအဒေါ်ကြီးကလဲ ကျမတို့ တအိမ်လုံးနဲ့ သိပ်ရင်းနှီးပါတယ်။ အိမ်မှာလုပ်တဲ့ အလှူအတန်းဆို သူက ရှေ့ဆုံးက လာကူလေ့ရှိတယ်။ တခြားမြို့မှာ အလှူသွားလုပ်ရင်တောင် သူက လိုက်ပြီး ကူလုပ်ပေးသေးတာ။ သူသေသွားတော့ ရေတွင်းနားမှာ အသံကြားရသလိုလို သူ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရိုးတိုးရိပ်တိတ် မြင်ရတွေ့ရသလိုလို ပြောကြတယ်။ ကိုယ်တိုင် တခါမှ မကြုံဖူးပေမဲ့ သူအိမ်နားက ဖြတ်သွားရင် အသည်းတထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘုရားစာဆိုပြီး ဖြတ်ကြရတယ်။ သူသေသွားပြီးနောက်ပိုင်း သူ့နာမည်ကိုလဲ အိမ်မှာ ခြောက်ရမယ့် စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ကြပြန်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်နားမှာ လူတယောက်သေတိုင်း ကျမတို့ မောင်နှမတွေအတွက် ခြောက်ရမယ့် (ကြောက်ရမယ့်) စာရင်းထဲ နာမည်တိုးတိုးလာ တော့တာပဲ။
အဖေပြောပြတဲ့ သရဲရာဇ၀င်တွေကိုတော့ ငယ်ငယ်က တော်တော်လေး ကျောချမ်းစွာ နားထောင်ခဲ့ဖူးတာပါ။ အဖေနေခဲ့တဲ့ အိမ်က အခုပြောနေတဲ့ ခြံနဲ့ လမ်းကျဉ်းကလေးပဲ ခြားတယ်။ အိမ်က သုံးထပ်၊ အပေါ်ဆုံးထပ်က အခန်းလေးကို အဖေက ကိုယ်ပိုင် လိုင်ဘရီကလေး လုပ်ထားတယ်၊ စာဖတ်ရင်း အိပ်ချင် အိပ်လို့ရအောင် ကုတင်တလုံးလဲ ရှိတယ်။ တညမှာ အာဂန္တု ဘုန်းကြီးတပါး ကြွလာတော့ အဖေက အဲဒီအခန်းမှာ ပေးသိပ်တာ ဘုန်းကြီးခမျာ တညလုံး မကျိန်းလိုက်ရရှာဘူးတဲ့။ သူ့ကို အိပ်မရအောင် အမျိုးမျိုး လုပ်တယ်ဆိုပဲ။ အိပ်ရာပေါ်က ဆွဲချလိုချ အသံအမျိုးမျိုးနဲ့ နှောက်ယှက်လို နှောက်ယှက်နဲ့ … မေတ္တာပို့လဲမရ၊ ပရိတ်ရွတ်လဲ မရ … နောက်ဆုံးတော့ ဘုန်းကြီးအိပ်ရာမှာ ကန့်လန့်ဖြတ်ကြီး လာအိပ်တာနဲ့ ဘုန်းကြီးက ကိုယ်ရုံသင်္ကန်းနဲ့ ရိုက်လိုက်တာ နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားသတဲ့။ ဘုန်းကြီးလဲ နောက်တည ဆက်မနေတော့ဘဲ တခြားကြွသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီအိမ်မှာပဲ အဖေ့ဦးလေးရဲ့ ဇနီးတယောက်ဟာ မီးဖွားရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခေတ်ဆန်ဆန် ခပ်ချောချော ကပြားမလေး နာမည်က ဘာဘရာတဲ့။ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း အဲဒီအိမ်က လှေခါးမှာ မိန်းမတယောက်ကို ညဘက်တွေ တွေ့ရတတ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဆံပင်ဖါးလျားချပြီး အသားရောင်က ဆနွင်းလို ၀ါဝါနဲ့ လှေခါးမှာထိုင်နေတတ်တယ်။ တခါတလေ စန္ဒယားက လူမရှိဘဲ အလိုအလျောက် အသံတွေထွက် နေတယ်တဲ့။ အားလုံးကတော့ အဲဒါ ဘာဘရာ ခြောက်တာလို့ ပြောကြတာပဲ။
သင်္ချိုင်းနားမှာ သရဲဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ယဉ်ပါးပြီး ကြောက်တခါ လန့်တလှည့် နေလာလိုက်တာ တော်တော်လေး အရွယ်ရောက်သည်ထိ သရဲနဲ့ တခါမှ မကြုံဖူး မဆုံဖူးပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ … ယုံလဲ မယုံခဲ့ဘူးပေါ့။
ဒါဟာ လူတွေ စိတ်ခြောက်ခြားတာ နေမှာပါ … တစ္ဆေသရဲဆိုတာ လူထက် နိမ့်ပါးတဲ့ သတ္တ၀ါတွေပဲ … လူအနားကို မကပ်နိုင်ပါဘူး … လို့ အယုံအကြည် ကင်းမဲ့ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတော့ မယုံချင်လို့မရဘဲ ယုံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒါကတော့ … … ... ... ...
(နက်ဖြန် ဆက်ရန် … )
မှတ်ချက်။ ။ ပုံတွေကို တွေ့ကရာနေရာက ကြုံသလို ယူထားပါသည်။ နေရာအတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါ။ ပိုင်ရှင်ရှိက လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။
Posted by မေဓာဝီ at 9:36 PM 21 comments
ဒီစနေ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်ကတော့ ကျမအတွက် အမှတ်တရပါပဲ။ မနေ့ည မီးထွန်းပွဲပြီးတော့ ဒီကနေ့ ဘာမင်ဂန်ကျောင်းမှာ ကထိန်ပွဲ ကျင်းပမှာမို့ ကျမတို့ တူဝရီး သွားကြတယ်။ ရာသီဥတုက အေးပေမဲ့ နေသာလို့ သာသာယာယာ ရှိနေတယ်။
ကျောင်းကန် ဘုရားရိပ်ကတော့ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခိုဝင်သူတိုင်းကို ကြည်နူးချမ်းမြေ့မှုအတိ ပြည့်ဝစေတာပါပဲ။
ပဒေသာပင်မှာ ကိုယ်လှူမယ့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေ ချိတ်ကြ၊ သင်္ကန်းတွေမှာ အလှူရှင်နာမည်တွေ ကပ်ကြ စသဖြင့် လုပ်အားပေးခဲ့ကြတယ်။
မနက် ၁၀ နာရီခွဲ သံဃာတော်တွေ ဆွမ်းမဘုဉ်းပေးခင် ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အနုလုံ ပဋိလုံ၊ ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတယ်။
စားစရာတွေကတော့ စုံလို့ပါပဲ။ အချိုပွဲအတွက် မုန့်မျိုးစုံ ပြင်ဆင်ထားတာပါ။
သစ်သီး သစ်နှံ ပြင်ဆင်ဟန်
အသီးတွေကို ပန်းပွင့်ပုံလေးတွေဖော်ပြီး ပြင်ဆင်ပေးသူက ထိုင်းအမျိုးသားတဦးပါ။ သူ့ပြင်ဆင်မှု လက်ရာကို လူတကာ သဘောကျကြတော့ သူလည်း ပီတိတွေ ဖြစ်ပြီး ငါ ဒီနေ့ သိပ်ပျော်တာပဲလို့ တဖွဖွပြောနေလေရဲ့။
မြန်မာပြည်ပြန်စရာမလိုဘဲ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံ မြန်မာ အစားအစာ လက်ရာမျိုးစုံ စားရတယ်။
သံဃာတော် စုစုပေါင်း ၈-ပါးပါ။ ကျောင်းက သံဃာ ၄-ပါးနဲ့ အာဂန္တု ၄-ပါး။ ဖိတ်စာထဲမှာ တိပိဋက ဆရာတော်လာမယ်လို့ ရေးထားပေမဲ့ မကြွလာနိုင်ခဲ့ဘူး။
Milton Keynes မဟာယာနကျောင်းမှ ဂျပန်မယ်သီလရှင်လေး၊ သဘောကောင်းပြီး ချစ်စရာသိပ်ကောင်းပါတယ်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တရဉာဏက ကထိန်သင်္ကန်းအကြောင်း ရှင်းပြပြီး ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းရခြင်း အကျိုးကိုလည်း ပြောပြပါတယ်။
ပရိသတ်တော်တော်များပါတယ်။ ဘုရားထဲမှာ အပြည့်နီးပါးပဲ။ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ အစုံလာကြတယ်။ အာဖရိကန်သူ တယောက်တောင် မြင်လိုက်သေးရဲ့။
သံဃာတော်တွေကို ကပ်လှူထားကြတဲ့ ကထိန်သင်္ကန်းတွေပါ။
အဖြူ အမည်း အညို အ၀ါ ဘာမှ မခွဲခြားဘဲ တသားထဲ အားလုံးအတူတူ ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ ဒီကနေ့ ကထိန်ပွဲလေးဟာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာ စိရံတိဋ္ဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီး ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အိမ်မပြန်ခင် ဘာမင်ဂန်စေတီတော်ကြီးကို ဦးခိုက်ရှိခိုးပြီး မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်နောင် နှစ်များမှာလဲ ဒီလိုပဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွှဲခွင့် ရချင်ပါသေးတယ်။
၂၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀
Posted by မေဓာဝီ at 10:56 PM 16 comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:59 PM 14 comments
ကိုယ့်မီးကိုယ် မွှေးခဲ့တယ် ... ။
ကြည်နူးခဲ့တယ် … ရည်စူးခဲ့တယ် …
သဘောချင်းထပ် … မနောချင်းဟပ်ခဲ့ကြတယ် …
စကားတွေကြွယ် … တရားတွေဖလှယ်ခဲ့ကြတယ် …။
တပင်ပြီး တပင် ပတ်ရစ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တည်လာခဲ့ကြတယ် … ။
နှစ်ဦးသားသိသိနဲ့ ဆူးများငြိတွယ်ခဲ့မိတယ် … ။
စူးတဲ့ ဆူးကို ဆူးနဲ့ထွင်ရင်း
ရင်ခွင် တခုလုံးလည်း ကြေမွ
ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဒဏ်ရာရတော့
ရှောင်မရတဲ့ အပြစ်တွေ ပြုရင်း
ဒါဟာ … အချစ် နေ၀င်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး …။
ဖြတ်ရခက်တဲ့ နွယ်လဲ မတွယ်ချင် …
နုတ်ရခက်တဲ့နွံလည်း မကျွံချင်တော့ပါ …။
ကိုယ့်ဇာတ် ကိုယ်သာ သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်မီးကိုယ် မွှေးခဲ့မိ ...
ကိုယ်သာလျှင် အပြစ်ရှိပါစေကွယ် ... ။
၁၆၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၀
Posted by မေဓာဝီ at 9:40 PM 15 comments
Labels: ကဗျာ, ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ